iPhone ပေါ်ရှိအမျိုးမျိုး အိုင်ဖုန်းသတင်း
အားလုံးသူ့အကြောင်း iPhone ကိုအက်ပဲလ်ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်း။ ဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ် သတင်း၊ သတင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲမွမ်းမံမှုများ၊။ ဆော့ဖ်ဝဲတွင်ပါ ၀ င်သောရွေးချယ်မှုအသစ်များ၊ အိုင်ဖုန်းလောကသို့အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ကုမ္ပဏီပြောင်းလဲမှုများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဤစက်ကိရိယာ၊ Apple နှင့် iOS နှင့် iPhone တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောသတင်းများ၊ ။
သင်၏ AirTags များအတွက် Nomad သားရေကွင်း၊
por Luis Padilla လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ပေါင်း .
အရည်အသွေးမသက်ဆိုင်ဘဲလွယ်ကူပြီးစျေးပေါသောမိတ္တူမှထွက်ပြေးနေသည့် Nomad သည် AirTags အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အခြားသော့ကွင်းတစ်ခုပေးထားသည်။
ဤသည်မှာ MagSafe ဘက်ထရီ၏ပေါက်ကွဲသောဗွီဒီယိုဖြစ်သည်
por Jordi Gimenez လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ပေါင်း .
ယခုအပတ်တွင် YouTube channel Charger Lab မှဘက္ထရီပြတ်တောက်မှုကိုပြသရန် iFixit အဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။
por Toni Cortés လွန်ခဲ့တဲ့5ရက်ပေါင်း .
Kidizoom DX2 မှကလေးများအတွက်စမတ်နာရီ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအထူးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကလေးများအတွက်စမတ်နာရီတစ်ခုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည်။ VTech မှ Kidizoom DX2 သည်ပျော်စရာကောင်းပြီးကူညီသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပိုင်ရှင် Mark Zuckerberg ၏ကုမ္ပဏီသည် messaging service တွင်အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် WhatsApp ကိုဆက်လက်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသည်။
Apple သည် virtual reality ထုတ်ကုန်များအတွက် spatial audio ကိုလုပ်ဆောင်နေသည်
por Toni Cortés လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
တခါတရံမှာ Apple ရဲ့အပိုဖြည့်တင်းထားတဲ့မျက်မှန်တွေအကြောင်းဆောင်းပါးတွေကိုသူတို့အနာဂတ်လိုမျိုးခံစားခဲ့ရတယ်။
၉/၁၁ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို ၂၀ နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် Apple ပြသမည်
အကယ်၍ သင်သည်အရပ်ရှည်လျှင်နယူးယောက်ရှိ Twin Towers အပေါ်တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုသင်ပိုမိုလိုက်နာလိမ့်မည်။ ဟုတ်ကဲ့…
ဂူဂဲလ်အပ်ပလီကေးရှင်းဖြင့် pinball ကစားနည်း
Chrome ၏ဒိုင်နိုဆောဂိမ်းသည်ဂန္ထဝင်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်မှုမရှိသည့်အခါကစားရန်ခွင့်ပြုထားသောဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်။
သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းများအားလုံးကိုဤ UGREEN 20W အားသွင်းစက်ဖြင့်အားသွင်းပါ
နွေရာသီရောက်လာပြီ၊ မင်းတို့ထဲကအများစုဟာအားလပ်ရက်တွေစီစဉ်ဖို့စီစဉ်နေကြပြီ။ ကောင်းပြီ…
Kuo က ၂၀၂၂ အိုင်ဖုန်းတွေမှာမျက်နှာပြင်အောက်မှာ Touch ID ရှိမယ်၊ ဘယ်တော့မှတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး
por Toni Cortés လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
Kuo ပြောသောအခါ (သူရေးသည်ထက်) အနည်းဆုံးသင်သူ့ကိုနားထောင်ရမည်။ သူပြောတာမှန်သလား၊ မမှန်လားနောက်ပိုင်းမှာငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်။
မက်ဆာချူးဆက်ကနေ AirPod ကိုမျိုချတဲ့လူတစ်ယောက်ကိစ္စ။ ဟုတ်ပါတယ် Apple မှာ ...
iPhone7နှင့်7Plus ကိစ္စများသည် iPhone 8 နှင့် 8 Plus နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
iPhone7မှာတွေ့ရတတ်တဲ့ bug တွေ၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ